Mayelana Nathi - Kingtai Craft Products Co., Ltd.
Inkampani Kingtai Craft Products Co., Ltd.
Inkampani elinganiselwe yomkhiqizo we-Kingtai craft, umkhiqizi wezikebhe wensimbi odumile waseChina, oseneminyaka engaphezu kwengu-20 enolwazi lokukhiqiza ubuciko obuhlukahlukene, ukuhlanganiswa kwayo ngokuphelele kwezimboni nenkampani yokuhweba, ngakho-ke sineqembu elivuthiwe lokuklama kanye neqembu lebhizinisi.
Selokhu yaqalwa, Amalayisense namalungelo obunikazi Esiwatholile angaphezu kwezingcezu ezingu-30, eziningana zazo okuyi-Disney, Wal-Mart, Harry potter, Universal Studio, SGS, FDA kanye ne-ISO9001.
Sihlinzeka ngemikhiqizo yekhwalithi ye-pop, okuhlanganisa okhiye, indondo, ibheji yokuphina, omazibuthe, isipuni sokulinganisa nokunye. Singakwazi ukuguquguquka kwezidingo zebhizinisi lakho futhi senze imikhiqizo ngokuya ngezithombe zakho eziklanyelwe, amasampula enziwe ngokwezifiso, kanye nezidingo ezinemininingwane.
Kule minyaka Eyishumi, besingabahlinzeki be-Disney, Wal-Mart, Harry Potter kanye ne-Universal 'Studios, Sithengisa imikhiqizo yethu ngokuqondile ezitolo futhi siphinde siyidayisele ibhizinisi emhlabeni jikelele, uhla lwethu olukhulu alulokothi lwehluleke ukwanelisa izidingo zamakhasimende ethu futhi ihlale ibuyekezwa ukuze ifake intuthuko yakamuva embonini yemikhiqizo yokukhangisa.
I-KingTai yanamuhla isebenza ngenjongo yesevisi yekhasimende lokuqala, futhi ibambe iqhaza kumbukiso waseCanton Fair naseHong Kong iminyaka eminingi. Sihlinzeka ngenkonzo eqotho kumakhasimende, futhi siqhubeka sisungula izinto ezintsha ngokholo lwendalo emnandi yokuphila
Ngakho kungani ungasivivinyi? Siyaqiniseka ukuthi sizokwazi ukuhlangabezana futhi sidlule konke okulindele.
Yini enye esingayenza ngelogo yakho?
Sihlinzeka ngezinhlobonhlobo eziningi zezikhonkwane zeqophelo langokwezifiso zoqweqwe lwawo lwezinga eliphezulu nezikhonkwane zokuphrinta ezidijithali ezinokuguqulwa okusheshayo. Dala izikhonkwane zakho zoqweqwe lwawo ezinamalogo noma hamba ngokwesiko ngeminyaka yesevisi. Ngethuluzi lethu lokufanisa imibala ye-Pantone, siqinisekisa ukuthi umklamo wakho uphuma nemibala efana ncamashi obuyicabangele.
Izikhonkwane zoqweqwe lwazo zinganikezwa abasebenzi ukuze babonise ukuhlonishwa noma amavolontiya ukuze babonise ukwazisa kwakho. Imikhiqizo yethu yangokwezifiso ihlala isikhathi eside ngokwedlulele ngekhwalithi efana nobucwebe, ilungele ukunikeza njengesipho noma uphawu lwenkampani yakho. Bonisa ukuziqhenya kwakho kwe-USA ngezikhonkwane zethu ze-American Flag. Ufuna ukusabalalisa ukuqwashisa? Sihlinzeka ngezikhonkwane zokuqwashisa nge-Die struck Ribbon, ezingenziwa ngezifiso ngomlayezo wakho okhethekile.
Ngomklamo wakho, ungathola izinhlobonhlobo zeminye imikhiqizo yekhwalithi ephezulu nge-oda lakho. Kusukela kumaketango okhiye, izintelezi, nama-cufflink kuye kumacici, omaka bezinja, amabhande amabhande, namamedali, sinesixazululo sazo zonke izidingo zakho zokuphromotha noma zomklomelo.
Izikhonkwane ezenziwe ngokwezifiso ziyathengeka futhi kulula ukuziklama. Ziyindlela enhle yokuklomelisa abasebenzi, amavolontiya nabafundi, bonisa inkampani yakho ngelogo, jabulisa iqembu lakho lezemidlalo, ukhuthaze iklabhu yakho, futhi uhloniphe omakadebona! Izikhonkwane zethu zefulegi zenziwe ngokuziqhenya e-CHINA Phequlula amagalari ethu ezithombe ukuze ugqugquzelwe ekudaleni kwakho okulandelayo.